Ndị enyemaka enyemaka Robot na-abịakwute Mehmetçi! | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraNdị enyemaka enyemaka Robot na-abịakwute Mehmetçi!
10 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Kara, Isi akụkọ, agbachitere, Turkey, VIDIO
mehmetcige robot na-enyere aka abia
Ebula nkwekorita ndi Middle School nke abuo ndi agha bu nke anakpoghi anya ndi isi ulo oru ndi isi oche ndi isi ala (SSB) na ASELSAN.
Onye isi ala nke Onye isi nchekwa nke Onye isi ala. Dr. İsmail Demir: “Ndị enyemaka enyemaka na-abịakwute Mehmetçi! Mgbe ụdị ọkụ na nke ọkara na ọkwa 1 nke ụgbọ ala agbasaghị, anyị bịanyere aka na Aselsan maka ọkwa nke ọkara nke abụọ. A ga-ebuga ụgbọ ala ndị agha na-enweghị ogwe aka nye KKK site na ọrụ ahụ ebe Katmerciler ga-abụkwa onye na-emepụta ikpo okwu.
oru ngo; Ọ gụnyere mmepe na mmepụta nke ụgbọ ala ndị a na-achịkwaghị achịkwa na nchọpụta, onyunyo, nchọpụta lekwasịrị anya, usoro ngwa agha na sistemụ ndị ọzọ achọrọ, njikwa mpụga, iji aka na-agagharị ma na-agagharị agagharị. ”
Ọnọdụ nke Usoro Unmanned na nchekwa na nchekwa na-abawanye kwa ụbọchị. Karịsịa na ọnọdụ agha asymmetric, usoro a na-achịkwaghị achịkwa nke nwere ike ịrụ ọrụ na ala, oké osimiri ma ọ bụ ikuku ma kpebie onwe ha ka achọrọ iji rụọ ọrụ dịka nyocha, nyocha, ọgụgụ isi, agbachitere, nkwado logistic na ụdị ngwa ngwa.
A ga-eji ASELSAN mee ihe n'ọba agha nke ọdịnihu;
Ọ nwere ike na-achịkwa anya,
Ike nke ime mkpebi na mmejuputa onwe ya,
Ọ nwere ike rụọ ọrụ na ọnọdụ niile ma nwee akụkụ dịgasị iche.
Ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na mmepe na mmepụta nke Unmanned Systems.
N'ikwekọ na ebumnuche a, e mepụtala usoro ikpo okwu iji kpokọta ihe ọmụma na ahụmịhe nke nnwere onwe, ngwa agha nke usoro a na-achịkwaghị achịkwa, nhazi nke ọtụtụ usoro a na-ejikọtaghị na ntinye ha n'ime usoro iwu na njikwa, nke na-etolite ihe mgbochi ụlọ dị oke mkpa na mpaghara a. ASELSAN gosipụtara ụgbọ ala mbụ ọ na-achịkwaghị achịkwa, İZCİ, na GEZGİN na IDEF 14 International Defense Fair ẹkenịmde afọ 2007 gara aga. ASELSAN emeela ka akụrụngwa teknụzụ ya zuo oke n'ọtụtụ sistemụ na-enweghị iwu ọ bụla na mmepe mmekọrịta n'etiti ndị na-arụ ụlọ ikpo okwu / ndị si mba ọzọ.
ASELSAN ewetala ngwaahịa na teknụzụ dị elu yiri nke ahụ iji gboo mkpa nke TSK na mpaghara nke sistemụ na-enweghị nchịkwa. Na nchịkọta nke ndị agha nchekwa, ASELSAN ngwa agha, ụgbọ mmiri na ala (Bomb Destruction Robots) arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ.
PTT ntinye aka na crossing Osmangazi Bridge
Ọkpụkpụ Mehmetinik Amalitere Ngosipụta na Eskişehir
A ga-ezipụ ndị njem Metrobus ịrụ ọrụ na ofe
TÜDEMSAŞ Ekpere na-esote Mehmetçiklerin
Ekpere ekpere nke MOTAŞ maka Mehmetçik Ibanye na Olive Branch Operation (Video)
50 belata ọnụahịa Mmepụta na Mgbakọ Robot Investments
Nchịkwa siri ike nke Mmiri na Ọdọ Mmiri
Onye isi obodo ga-akwado Ankara Off-Season'19 Robotics Tournament maka Nke Mbụ